Juventus oo qorsheyneysa inay heshiis kala badalasho ah ku soo qaadato Salah | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Juventus oo qorsheyneysa inay heshiis kala badalasho ah ku soo qaadato Salah
Juventus oo qorsheyneysa inay heshiis kala badalasho ah ku soo qaadato Salah
Posted by: Mahad Mohamed February 14, 2019
Himilo FM –Juventus ayaa ka fiirsaneyso suurta galnimada heshiiska ay ku doonayso isdhaafsi laacibiinta magaca wayn ee Paulo Dybala si loogu diro Liverpool islamarkaana ay ku helaan Mohamed Salah.
Kooxda ka dhisan Serie A ayaa la fahamsan yahay inay Salah ka dhigtay mid ka mid ah ciyaartoyda diirada u saaran ee ay ku riyoonayso xagaaga suuqa kala iibsiga, iyadoo wararka la isla dhexmarayo ay soo jeedinayaan inay dalab 175 milyan oo ginni ay ka gudbin karaan xiddiga garabka uga ciyaara Qaranka masar.
Si kastaba ha ahaatee, Tuttosport ayaa sheegtay inay doonayaan inay hoos u dhigto dhaqaalaheeda iyagoo doonaya in ay iskugu daraan Dybala iyo lacag kaash ah.
Liverpool ayaan loo maleyneynin inay ka fekereyso iiibka xiddigeeda, kaasoo 64 gool u dhaliyay 86 kulan oo uu u saftay kooxda, laakiin Juve ayaa rajeyneysa inay tijaabiso go’aankeeda 43.9 milyan oo ginni oo lagu daray Dybala oo u dhaqaaqa Anfield.
Kooxda ka dhisan Talyaaniga ayaa dhawaan sheegtay in keliya Lionel Messi ama Neymar ay bedeli karaan Dybala, laakiin Cristiano Ronaldo ayaa la fahamsan yahay inuu doonayo Salah imaatinka kooxda, waxaana weeraryahanka Liverpool uu aadi karaa halkaas haddii Dybala uu baxo.
Xiddiga reer Argentine ayaa sidoo kale lala xiriirinayay Manchester United iyo Real Madrid.
Previous: Nin qariyay wajigiisa mar la guddoonsiinayay bakhtiyaa nasiib 1 Milyan oo dooalar!
Next: Man Utd oo kula biirtay Chelsea dagaalka loogu jiro xiddiga Ivan Rakitic
Shan tababare oo booska Gattuso ka bedeli kara kooxda Napoli
Chelsea oo 23 m ku dooneysa 17 jir u dhashay dalka France
Madaxweynihii hore ee Barca Bartomeu oo ay booliska Spain ka qabteen gurigiisa